PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - UGXEKA ABAHOLELA ABOKUFIKA AMAKINATI
UGXEKA ABAHOLELA ABOKUFIKA AMAKINATI
UNGGQONGQOSHE wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha Kwazulu-natal, umnu Sihle Zikalala, usola osomabhizinisi emkhakheni wezokuvakasha ngokuqasha abokufika ngenhloso yokubaholela amakinati.
Usho lokhu ngesikhathi ekhuluma emcimbini wezamabhizinisi obuseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, ethekwini, ngoLwesine. Usole osomabhizinisi abenza lokho ngokugwema ukulandela imithetho yezezisebenzi.
Kulo mcimbi obekuhlangene kuwo osomabhizinisi bekudingidwa ukubaluleka kwamabhizinisi kwezokuvakasha. Ungqongqoshe utshele osomabhizinisi ukuthi ukuze ezokuvakasha zithuthuke, kubalekile ukuba kubanjiswane.
Uphinde waphakamisa ukuba isouth African National Convention Buraeu (SANCB) iqinisekise ukuthi uma yaba imali noma imaketha leli lizwe kwamanye amazwe, ingakhethi iphela emasini, kodwa ikwenze ngokulingana.
I-SANCB yabelwe isamba semali elinganiselwa ku-r90 million ukusiza leli lizwe ekuheheni imicimbi yamazwe ukuba yenzeke kuleli. Ungqongqoshe uphinde wathembisa osomabhizinisi ukuthi indaba yokungcola nobugebengu obudlangile ethekwini uzoyisukumela.
“Kumele uma abezindaba bebika ngobugebengu, bangagcini ngokubika nje bengabe besalandelela uma seziboshiwe izigebengu futhi zagwetshwa,” kusho yena. lucky.cain@ilanganews.co.za
UMNU Sihle Zikalala usole osomabhizinisi ngokuqasha abokufika ngenhloso yokubaholela kancane.